[OFFICIAL] dr.fone toolkit - Android Data Irabha: Cima ngokupheleleyo Iinto Android kwaye ikwenzele
dr.fone toolkit - Android Data Irabha
Sula ngokupheleleyo Iinto Android kwaye ikwenzele
Simple, inkqubo cofa-nge.
Sula Android yakho ngokupheleleyo kwaye umphelo.
Sula iifoto, abafowunelwa, imiyalezo, imbawula call yaye zonke iinkcukacha zabucala.
Kuxhaswa zonke izixhobo Android ezikhoyo emarikeni.
Zama ukuba free Thenga Now
Simple kucinywe okanye Factory akuthethi ukusula idatha kwi-Android ngokusisigxina. Idatha esusiwe nangoku inokubuyiselwa ngobugcisa ekhoyo. Android Data Irabha kuqinisekisa ukuba ukhuseleko kwakho ikhuselekile ngokususa ngokusisigxina iifayile esusiwe, esusa yokubrawuza imbali, ukulondoloza nokukhusela inkcazelo yakho yobuqu.
Ukuthengisa okanye unikele Hambayo yakho Android?
Sebenzisa Android Data Irabha ukutshayela data zakho kuqala.
ukucima ngokupheleleyo yonke into efowunini yakho Android.
Ukuthengisa kusetyenziswa phone Android okanye tablet yakho? Sebenzisa dr.fone toolkit - Android Data Irabha ukususa ngokusisigxina zonke kwi Android yakho ikwenzele.
Kumsusa ngokupheleleyo phone Android ecocekileyo.
Traditional ukuhlela mveliso data akuthethi ucoce data yakho emnxebeni 100%. Android Data Irabha ikunceda kuzisula isixhobo Android icocekile kwaye sakhe asinakufumana okulingene ukubuyisela kuye iyibuyisele
Susa zonke iintlobo data kwi phone Android.
Android Data Irabha yenza ukuba ukusula data zabucala, ezifana iifoto, imiyalezo, abafowunelwa, zikhuni call, amanqaku, neekhalenda, kunye neenkcukacha app, njl
Erase phone endala Android ukukhusela wena.
Izixhobo ekunene, icinywe data kwi phone endala Android nangoku kubuyiswa. 1 out of 10 olixhoba yokwebiwa ehlabathini. Khusela inkcazelo yakho yobuqu babulale uhlambulukile kwaphela.
Xhasa amawaka Izixhobo Android iyasebenza kwinkqubo ezahlukeneyo Android.
Ngokomthetho toolkit dr.fone - Android Data Irabha ixhasa zonke izixhobo Android ezikhoyo emarikeni. Iza kunceda kakhulu xa izixhobo ezitsha ziyafumaneka.
Sula Zonke Iintlobo kweDatha Personal on Android yakho
Ungasebenzisa Android Data Irabha ukuba kuzisula zonke iinkcukacha yabucala, kuquka iifoto, imiyalezo nezifakelo, abafowunelwa, imbali call, amanqaku, neekhalenda, izikhumbuzo kunye data app, etc kwi Android wakho ngonaphakade.
Kutheni Khetha dr.fone toolkit
Akukho data igcinwe okanye ukuvuza ngexesha lenkqubo.
interface enobuchule kumntu wonke ukuba alusebenzise.
Xhasa Zonke Devices Android
Android Data Irabha ixhasa zonke izixhobo Android ezikhoyo emarikeni. Enoba une Samsung, HTC, Sony, LG, Google Nexus, LG, okanye ZTE, njl njl, kwaye yintoni Android version phone yakho isebenza, Android Data Irabha kunceda usule yonke into unomphelo ifoni.
kuyasebenza njani Android Data Irabha?
Android Data Irabha ikunceda unikele data yakho angafundekiyo ngokupheleleyo uze ekucoceni lonke disk ngokupheleleyo. Emva koko, abasebenzisi kufuneka ngesandla ukwenza Factory kwi wamagama yefowuni. Ngala sineendlela ezimbini, iinkcukacha zakho aziyi kuba nako ingahlawulwa nabani kwakhona.
Ngaba Android Data Irabha ukucima ngokupheleleyo yonke i data kwi phone?
Ewe, Android Data Irabha ngokupheleleyo umphelo ekucoceni zonke iinkcukacha zakho kwi yefowuni, kuquka abafowunelwa, imiyalezo, iifoto, zikhuni call, neekhalenda, app kunye data app, njl
Yintoni Kufuneka ndihlawule ingqalelo xa usebenzisa Android Data Irabha?
Nceda musa uyeke ifowuni okanye ukuvula nayiphi na isoftwe yolawulo Android ngexesha yonke le nkqubo. Yaye ekupheleni, landela imiyalelo kwi-Android Data Irabha ukwenza Factory kwifowuni yakho.
Ziziphi izixhobo Android wenza Android Data Irabha inkxaso?
Okwangoku Android Data Irabha ixhasa zonke izixhobo Android ezikhoyo emarikeni. Kwaye ngokukhawuleza iza kuxhasa izixhobo ezitsha Android zakuba abakhululwa.
" Wondershare dr.fone toolkit ye Android i kulula ukuyisebenzisa interface enokuba navigation ngabasebenzisi onke amanqanaba olwazi. Kuyinto elula kwaye asisebenzisi isixa esikhulu kwezibonelelo nkqubo. Lilonke, lo sixhobo kit kunokuba luncedo ukuba Sukani niphume ngayo imeko incangathi ezimbalwa xa kufikwa recovery data ye device yakho Android. Funda ngakumbi >>
- Ukusuka filehippo, a umxokozelo site software top-zibalwa ngokubonelela software top-ezingeni kuphela.
dr.fone ucocwe Nokia wam S5 ngokupheleleyo ngaphandle koqiniso. ngoku athengise ngayo awunandaba ulwazi lwam.
Android irula data ngokwenene asebenza kakuhle.
Ekuqaleni wayengandithembi. Kodwa dr.fone ujika ngaphandle ukusebenza ngokugqibeleleyo. Intle!
Top 7 Android Data Irabha Software ukuba Sula unaphakade Android yakho Old
Top 6 Android Data Erase Apps ikwenzele
Indlela Buyisa Kususwe Iifoto Samsung Galaxy / Note
Buyisa Idatha evela Samsung Mobile Phones
2 Iindlela Yenza Samsung Indawo yoBuyiselo-nkcukacha kufuneka uyazi
Indlela Buyisa imiyalezo evela Samsung wakho Cell Phone
Indlela Best ukubuyisa Content Kususwe evela Samsung Phones
data Ukophulwa phones Android eyaphukileyo amacwecwe kwemizuzu emi-5.